भ्यूटावर, लामा झोलुंगे पुल र बालबाग
बेनी कालीपुलस्थित भ्युटावर तस्वीर: प्रकाश शर्मा
विकासका योजनाहरू कसरी बनाइन्छन् ? यीनका छनौटहरू कसरी गरिन्छन् होला ? ती विकासका योजनाहरूको अपरिहार्यताको पुष्टी कसरी गरिन्छ होला ? भन्ने प्रश्नहरूले मलाई सधैं नै घच्घचाइरहन्थे । तर पछिल्ला २/४ वर्षदेखि नेपालका सन्दर्भमा हुने विकासका योजनाहरूका बारे सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आएपछि मलाई लाग्न थाल्यो - यो त नेताको सनकको विषयमात्र रहेछ । जस्तो - कोही उड्डयन मन्त्रीले ठूलो फराकिलो चौर देख्यो - उसको दिमागमा विमानस्थलबाहेक त्यो चौरमा बन्न लायक अर्को कुनै योजना हुँदैन् । कुनै सांसदले एउटा खोला देख्यो - उसको मगजले त्यहाँ बढीमा देख्ने ठूलो सपनाभनेको मोटर गुड्ने पुल नभए एउटा झोलुंगे पुल । र, कुनै मेयरले बालुवाका वगरमा क्रसर उद्योगबाट पैसा उठाउने बाहेक अर्को कुरामा ध्यान दिन सक्दैन । नेताको सनकका अगाडि योजनाको आवश्यकता, औचित्य र महत्वका बहस निरर्थक रहने हाम्रो देशको बिडम्बनापूर्ण व्यवस्था बन्न गएको छ । यो सनकले भरिपूर्ण बिडम्बनाको गाडी काठमान्डुको सिंहदरबारबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएर त्यसका सहायक मार्गहरूलाई पछ्याउँदै गाउँ गाउँका सिंहदरबारसम्म पुग्दो क्रममा छ ।
केहि हप्ताअगाडि कता कताका शहरबजारका चोकहरूमा कंक्रिटका फूलहरू फुलेका तस्बीरहरूले आँखा नबिझाएका पनि होईनन् तर आफ्नै जिल्लातिर पनि सनककै भरमा भैरहदै गरेका विकासका केहि कामहरूबारे थाहा पाउँदा मुटु भक्कानिएर आएको छ । पर्वत सदरमुकाममा वरपरका बस्तीहरूलाई सदरमुकामसँग जोड्नका लागि झोलुङ्गे पुलहरू बनाइयो, जुन लामा र अग्ला स्थानमा बन्न पुगे । स्वभाविकरूपमा कालिगण्डकीको खोंचमा झोलुंगेपुल हालिएपछि ती डेढदुइ सय मिटर लामा र नदिको किनारबाट सय डेढसय मिटर अग्ला स्थानमा हुने नै भए । मुस्ताङ घुम्नजाने पर्यटकले साहसिक खेलहरू बन्जी जम्प गर्ने सुविधा कुश्मामै पाएपछि एकदिन त्यही बास बसेर बजारकै छेउमा भएका लामा, अग्ला पुलमा सेल्फी खिच्न पुग्ने नै भए तर त्यही देखेर रत्नेचौर - कुँडुले झोलुंगे पुलको महत्व/आवश्यकतालाई पुष्टी गर्न त सकिदैन होला । जुन बस्ती भएर कालोपत्रे सडक गएको छ त्यही बस्तीलाई जोड्न हालिने झोलुंगेपुलको महत्व कसरी दर्शिन्छहोला ? त्यहाँ हालिने पुल भएर दिनमा कति जना मान्छे बजार भर्न जाने होलान् ? सोच्दासोच्दा म तीन छक छु । रत्नेचौर भकुण्डे क्षेत्रमा दुरागामी महत्व राख्ने रत्नेचौर-भकिम्ली- बरंजा सडक कालोपत्रे योजना जति प्रशंसनीय र स्तुतीय छ त्यसको ठीक विपरित रत्नेचौर - कुँडुले झो.पु को योजना आलोचनायोग्न छ । गाउँघरमा परेको योजनाको पनि विरोध गर्ने हो ? सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने तपाइँहरूको मत हो भने, पख्नुस् - मलाई अझ एउटा चिन्ता छ - कुँडुलेका मकैबारीमा झुत्ती खेल्ने रातचाके बाँदरका झुण्ड यहि पुल भएर रत्नेचौरका बारीका मकै सखाप पार्न आउने त होइनन् ?
उसो त योजना छनोटको त्यो भन्दा दश गुणा हास्यास्पद त बेनी बजारको पनि होचो स्थानमा अवस्थित कालिपुलमा कालीगण्डकी माथि हालिएको पुरानो पुलको ढुंगे खम्बालाई आठ दश लाख खर्च गरी मर्मत गरेर भ्यूटावर बनाउने बारे बेनी नगरपालिकाको एउटा वार्डको योजनाबारे थाहा पाउँदा कति सचेत नागरिकहरूको हंसले ठाउँ छाडिसकेको नै छ । फेरि केहि मानिसहरू कस्ता हुन्छन् भने विकासको काम जस्तोसुकै होस् त्यसकाबारे आलोचना गरिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरूले पढ्ने विकासका किताबहरूमा दीगोविकासको अध्याय नै हुँदैन । विकासको औचित्य भन्ने पाठको चाँहि पाना च्यातिएकाले त्यसबारे उनीहरू त्यति भेउ पाउँदैनन् । अतः म जस्तो विकासका सबै योजनाहरू विनाशर्त कार्यान्वयन योग्य रहँदैनन् भन्ठान्ने मनुवाहरू उनीहरूका लागि नकारात्मकताको मात्र प्रचार गर्ने मानिस बन्न पुगेका छौं । अतः अलिकति सकारात्मक भएर सोच्दा यो भ्युटावरको पनि राम्रो उपादेयता चाँहि देखिदो रहेछ । यो पढ्दै गर्दा तपैंलाई लाग्न सक्ला - त्यस्तो होचो ठाउँमा हुने १५ मिटर अग्लो भ्यूटावरको उपादेयताचाँहि के ? यसो सोच्नुस् त - चार पाँच वर्ष अगाडि नै खुला दिशापिसाबमुक्त जिल्ला घोषणा भएको हाम्रो जिल्ला सदरमुकामको खोलाकिनार के साँच्चै दिशापिशाबमुक्त छन् त? यदि तपाइँको जवाफ - कहाँबाट हुनु ? भन्ने हो भने, बुझ्नुस् ती अटेरीमान्छेहरूको निगरानीका लागि त्यो भ्यूटावर आवश्यक छ । बरू वार्डध्यक्षलाई कसैले थप ज्ञान पनि दिने कि - टावर रूँघ्ने एउटा मान्छेको आवश्यकताको विज्ञापन निकाल्नुस्, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हुन सक्छ भने वार्डध्यक्ष बेरोजगारी उन्मुलन कार्यक्रम किन नबनाउने ?
नगरपालिकाका बजेटले बालबालिका खेल्ने स-साना बाल बाग बनाउन नमिल्ने हो ? नगरबासीहरू टहल्न जाने बगैंचा बनाउन नमिल्ने हो ? पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत शिशु स्याहार केन्द्र, युवाहरूका लागि हलभित्र खेल खेल्न मिल्ने भवन, सार्वजनिक पौडी पोखरी, महिला शसक्तिकरणका योजनाहरू, जातिय विभेद निर्मुल पार्ने कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने हो ? कि हाम्रा लागि विकासको परिभाषा समकालिन विश्वका बुझाईहरूभन्दा फरक हुन ? हामीले अलि माथि, अलि फरक, अलि बढी सृजनात्मक विकासका योजनाहरू बनाउनै नसक्ने हौं त ?
development in Nepal Myagdi